လူမှုမီဒီယာနှင့်ကန့်ကွက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 2, 2010 စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28, 2015 Douglas Karr
ဒီမနက်မှာ Aprimo ရဲ့ site မှာတွေ့တဲ့ whitepaper ကြီးကိုငါဖတ်နေတယ် လူမှုမီဒီယာကိုပေါင်းစပ်.
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ဂိမ်း - ပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းရည်များကိုလက်ရှိဆက်သွယ်ရေးရောနှောခြင်းသို့တည်ဆောက်ရန်အစမှစစရာမလိုပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမီဒီယာအသစ်များနှင့်ဝက်ဘ် ၁.၀ တိုးချဲ့ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည် ၄ ​​င်း၏ရရှိနိုင်သည့် bandwidth နှင့်အရင်းအမြစ်များအတွင်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအသစ်များကိုအသုံးချနေကြသည်။
အဆိုပါ whitepaper သည်ပြော၏ ရောင်းအား၏အခန်းကဏ္။ နှင့်စျေးကွက်အတန်ငယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း။ အများပြည်သူနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခါမျှဆက်သွယ်ဖူးခြင်းမရှိသောစျေးကွက်သမားများသည်ယခုအခါအမှတ်တံဆိပ်အားအများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့မှာဘာလေ့ကျင့်မှုမှမရှိဘဲဒီကိုပြီးမြောက်ဖို့လိုတယ် ကန့်ကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ငါသည်ငါ့၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာဒီဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် Webtrends Engage မှာတင်ဆက်မှု.
တစ်ချိန်တည်းမှာငါတို့ salespeople ရာထူးယူဆရန်မျှော်လင့်နေကြသည် Social Media မှာဆိုလျှင်သူတို့ပြီးပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
လက်စွဲစာအုပ်သည်အကြံပြုချက် ၄ ချက်ပါရှိသည်။
တစ် ဦး Focal Point သည်တည်ထောင်ရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ထမ်းမှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲရန်တာ ၀ န်ရှိသင့်သည်။ ၎င်းတွင်ယာဉ်များမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုမည်၊ မည်ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲမည်၊ ကော်ပိုရိတ်ပေါ်လစီနှင့်အညီမည်သူ့ကိုတာဝန်ပေးသင့်သည်စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပါအ ၀ င်ပိုမိုကြီးမားသော ၀ ယ်ခြင်းသံသရာတွင်ပါ ၀ င်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရောက်သော် Fortune 2010 ကုမ္ပဏီ ၆၀% ကျော်သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ဖောက်သည်များကြားခံရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအချို့ရှိလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြီးမားသော CRM မဟာဗျူဟာ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစနစ်တကျခွဲဝေချထားပေးရန်သေချာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပို့ကုန်ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှလုပ်ဆောင်မှုများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းတွင်လူမှုမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ernကိုပိုင်းခြားသိမြင်ရန်အရေးကြီးသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ထမ်းများမှလူများကိုအရောင်းသင်တန်းများသို့ခေါ်ဆောင်ပါအထူးသဖြင့်တစ် ဦး မှတစ် ဦး ဆက်သွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေသောလူမှုဖိုရမ်များတွင်ပါ ၀ င်သူများ။ ဖောက်သည်များသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖိုရမ်များတွင်ပံ့ပိုးပေးသူနှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုလွတ်လပ်စွာဝေဖန်သောကြောင့်၊
တစ်သွားလာရင်း - အကြားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ အရောင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အရောင်းဝန်ထမ်းများသည်လူမှုမီဒီယာတွင်အထူးသဖြင့်သူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့်နေရာများနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများအားအမှတ်တံဆိပ်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများကိုတူညီသောအယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
ငါလမ်းညွှန်အချို့ပေးထားတယ် အရောင်းဝန်ထမ်းများသည် Social Media ကိုစတင်ကျင့်သုံးမည် - ဒါပေမယ့် whitepaper ဟာကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကနေအများကြီးပိုပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ငါလည်းရောက်ပြီ အရောင်းသင်တန်းတက်ခြင်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနှင့်မြင့်မားသောစျေးကွက်ကအကြံပြုလိမ့်မယ်! CEO ဖြစ်သူ Bill Godfrey နဲ့အင်တာဗျူးနေတယ် Aprimo ဒီနေ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဆွေးနွေးမှာပါ။ လာမယ့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
Aprimo ၏ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဝဲလ်သည် B2C နှင့် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဘတ်ဂျက်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်၏ပြောင်းလဲနေသောအခန်းကဏ္successfullyကိုအောင်မြင်စွာလမ်းပြနိုင်စေခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ မှ Aprimo website က။
မတ်လ 2, 2010 မှာ 10: 59 AM
လိုင်းများအားလုံး မှုန်ဝါးလာသောကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် “ဌာနများ” ကို ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းကို အရှိန်မြှင့်နေသည်။ စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။